Amerika Latina: finoana, matoatoa, devoly ary tahotra. · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina: finoana, matoatoa, devoly ary tahotra.
Voadika ny 27 Desambra 2009 16:39 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Français, English
Manan-karena tokoa raha ny resaka tantara any Amerika Latina: ny angano sasany dia tonga aty amintsika avy amin'ny alàlan'ny Incas, Mayas na Aztecs, ary ny sasany nentin'ny fanjanahantany avy any Eoropa. Amin'ny tapany voalohany amin'ity lahatsoratra Amerikana Latina ity, hitety ireo lovan-tsofina sy angano malaza indrindra toa an-dry Llorona, ny Cegua, ny Cadejos ary ny “Evil Light” isika.
Ampahany amin'ny kolontsaintsika ny angano sy lovan-tsofina. Miteny Nina Maguid ao amin'ny lahatsorany “Amin'ny tahotra sy horohoro”, fa ny mpiosolo tena voalohany no nitantarana ireny tantara ireny ary matetika teo amorom-patana, ary tsy ho haiko ny tsy hanaiky izany. Nahazatra ahy ny naheno ny sasany tamin'ireny tantara ireny amin'ny fomba fitantaran'ireo ao an-toerana, nandritra ny fialan-tsasatro, mipetraka manodidina ny latabatra fihinanana any amin'ireo toeram- piompiana any ambanivohitra, ny tavanay tarafin'ny firehitrin'ny jiro solitany. Ampy hampahatsihy tantara iray ny vovon'alika na ny godogodon-tsoavaly mamaky ny fahanginan'ny alina. Mitanisa tahotra telo manokana malaza any amin'ny tanindrazan-dreniny any Argentine i Nina: Ilay taratra ratsy, ilay mananontena ary ilay kisoa.
Biby mahatahotra mitsambikina aminao, avy amin'i kevindoolay
Araka ny Comodín at El Blog de Oro, ampiasaina hitadiavana harena miafina io taratra io: raha fotsy izy dia fambara harena miafina vita amin'ny volamena sy volafotsy, raha mena kosa, tsy maintsy mandositra ry zareo, satria amperin'asa eo ny devoly. Tsy an'i Argentine irery izany tantara izany: maneran-tany ny olona dia niezaka ny nanazava ny dikan'ireny taratra saro-pantarina ireny izay miseho mandritry ny filentehan'ny masoandro, toy ny any Espana sy Chile.
Ilay Mananontena dia vehivavy voafitaka tamin'ny fitiavana, izay maty raha nahafantatra fa nanitsakitsaka azy ny vadiny. Nanao fanekena tamin'ny devoly izy mba hijanona mandrakizay ety an-tany ary hanao ny valifatiny. Miakatra amin'ny soavalin'ireo lehilahy tokan-tena hono izy ary mitaingin-tsoavaly miaraka aminy, ka raha matahotra ilay lehilahy dia vonoiny. Ny hany fomba hahafahana amin'izany dia mitondra rozery (saple) na hazofijaliana ary mandresy ny tahotra. Latsa-paka tokoa ao amin'ny fomba amam-panao any Arzantina izany tantara izany hany ka ny fomba fiteny hoe “notsidihan'ilay Mananontena” dia najary ilazàna zava-tsy ampoizina na mahasorena.
Manoratra momba ilay Mananontena Mainty koa El Loco Bender (Bender adala), ary manampy trotraka ny tahotra ao amin'ity tantara mampitsangam-bolo ity amin'ny fampanantenana fahafatesana irery, miadana ary mangirifiry ho an'ireo lehilahy tsy mahafehy tena na mpanitsakitsa-bady sendra azy.
Manana tantara mitovy amin'izay koa i Costa Rica, fantatra amin'ny anarana hoe ‘La Cegua’. Hisakana ny soavalin'ireo lehilahy tokan-tena sy mpanitsakitsa-bady La Cegua, amin'ny fanintonana azy ireo amin'ny hatsaran'ny endrika amam-bikany, nefa raha vao tafakatra eo amin'ilay soavaly izy, raha mitodika mijery azy ireo lehilahy dia hahita fa karandohan-tsoavaly feno hena lò ny endriny, ary hokaikeriny ny tarehin'izy ireo ho mariky ny fanitsakitsaham-bady. Na izany aza, manoratra ilay mpitoraka blaogy Elemental fa mety ho ratsy lavitra noho izany ny vokany: ireo lehilahy mpanitsakitsa-bady rehetra dia ho faty ary ny mason'izy ireo hidiridiry nohon'ny tahotra, ary ireo izay tsy mpanitsakitsa-bady kosa ho velona, fa halemy mandritry ny androm-piainan'izy ireo.
Manoratra momba ny Cadejos koa Elemental, alika devoly izay mipoitra amin'ny alina miaraka amin'ny feona rojo mitaritarika, na dia tsy hita maso aza izany. Mitovy habe amina zanak'omby, matevim-bolo ity alika ity, be nify ary manana maso, orona ary sofina mahatahotra, ary mampivarahontsana izay rehetra lalovany, manomboka amin'ireo zaza maditra sy ireo lehilahy tsy manara-dalàna hatramin'ireo biby fiompy. Na izany aza anefa, mikendry zava-tsoa ity “horohoro” ity, satria hanatitra ireo lehilahy mamo hatrany an-trano izy mba tsy hisy voina hanjo azy ireo ary hiaro azy ireo amin'ireo zanaky ny alina koa aza, toa an'ilay La Llorona na ireo mpangalatra an-dalam-be. Any Guatemala kosa, mihevitra ry zareo fa misy karazany roa ity alika ity: iray mainty ary iray fotsy. Ilay alika fotsy dia hiaro izay rehetra tafara-dia aminy, ary ao amin'ny Deguate.com, Rtoa. Argentina Barcia dia mitantara ny fomba nanampian'ilay Cadejos azy ireo hitady ny fatin-drainy. Ao amin'ny El Blog Chapin misy tantara iray hafa mampivarahontsana momba ny fomba nitrangàn'ny El Cadejos tamina mponina an-tanan-dehibe iray nivahiny tao amina toeram-piompiana iray, ary ny tokony hihainoan'ny olona ny fampitandremana ataon'ireo tompon-tany momba ny hery tsy fantatra.
La Llorona avy amin'i rareworlds
Ny lovan-tsofintsika farany androany dia ny an'i La Llorona, [en] tantara iray izay nahatonga ahy natahotra saka lozan-tany nandritra ny taona maro nandritry ny fahazazàko. La Llorona dia “ilay vehivavy mpitomany”, ary iray amin'ireo tahotra iraisam-pirenena izy ity. Manomboka any Meksika hatrany Chile, mitoetra tsy lavitry ny loharanono i La Llorona (mety ho isan'izany ny kovetan-drano ao an-tokotaninao) ary midradradradra ny amin'ireo zanany nafoiny. Mety ho eo fotsiny izy hampitahotra anao, na raha any Kolombia [es] ianao, mety asainy hitrotro ny zanany iray segondra monja ianao, satria tena valaka tokoa izy, ary avy eo ianao voaozona ho La Llorona mandra-pisy olona hafa haka ilay zaza eny an-tratranao. Miovaova isaky ny firenena ny tantaran'ny namoizany ireo zanany, nefa misy zavatra itovizan'ny sasantsasany amin'izy ireo ihany. Vehivavy nanambady lehilahy manan-karena lavitra noho izy, voafitaka na nilaozam-bady, ka nanapa-kevitra ny hanampatra ny hatezerany tamin'ireo zanany amin'ny fandetehana azy ireo tanaty rano, ary avy eo naneninatamin'izany safidy izany. Ireo karazany hafa indray milaza vehivavy tanora sy maivan-doha izay namela ny zanany teo ambony vato amoron-drenirano izay noeritreretiny ho toerana azo antoka hametrahana azy raha handeha handihy izy, avy eo miakatra ny rano dia maka sy mitondra ilay zazakely, ary noho izay dia mijanona akaikin'ireo renirano ilay vehivavy ka manontany ireo olona rehetra sao nisy nahita ny zanany izy ireo.
Ity horonan-tsary fohy avy any Costa Rica ity, Asusto, nataon'i Pablo sy Francisco Céspedes Jr dia maneho ampahany betsaka, raha tsy ireo lovan-tsofina rehetra avy any Costa Rica mihitsy, anisan'izany ilay sarety tsy misy omby sy ilay pretra tsy misy loha. Tsy mila fandikàna teny: toa tsy misy ilàna ireo teny rehefa sahirana mandositra tahotra misolo tahotra ianao.